Fidinana tany amin'ny faritra SAVA | Primature
Mahazoarivo, ny 29 Desambra 2019 – Taorian’ny orana nikija izay nateraky ny andro ratsy tany amin’ny faritra Avaratry ny Nosy, dia nidina tany Maroantsetra sy Antalaha androany ny delegasiona izay notarihin’ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, nijery ireo fahavoazana ary nivory niaraka tamin’ireo tompon’andraiki-panjakana isan-tsokajiny hijerena vahaolana.
Raha tsiahivina dia dibo drano tanteraka ny tananan’Antalaha vokatry ny orana, ka raha namory ireo tompon’andraikitra voakasik’izany tany an-toerana ny Praiminisitra dia nanamafy ny tokony handraisin’izy ireo avy hatrany ny andraikitra tandrify azy. « Tsy rariny loatra raha efa ho herinandro dia mbola miaina ao anatin’ny rano maloto ny mponina », hoy ny Praiminisitra. Fomba fiasa vaovao, hoy hatrany izy no tokony apetraka, raha tiana handroso ny Kaominina, ny Distrika, ny Faritra ary indrindra ny Firenena, dia ny fahaizan’ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana izay efa nomena fahefana mandray andraikitra avy hatrany fa tsy hiandry ny fitondrana foibe foana.
Ho famahana haingana ny olana ka hanalana ireo mponina ao anaty rano maloto ao anatin’ny fotoana fohy ary, dia nanolotra vahaolana vonjimaika ny avy ao amin’ny BNGRC ka hampiasa olona eo amin’ny 2500, hanao asa tana-maro hanadio ny lakan-drano sy ny tanana. Nanambara anefa ny Praiminisitra fa tokony ho tohizana izany ezaka izany mba hisorohana ny mety hiverenan’ny tondra-drano, ka nanaovany antso avo amin’ireo tompon’andraiki-panjakana hanentana ny mponina sy ireo mpandraharaha ao Antalaha mba hiara-hisalahy sy hifanome tanana amin’ny fanarenana sy ny fikojana ireo fotodrafitrasa.
Eo amin’izay fandraisana andraikitra izay ihany, mikasika ny fahatapahan’ny rano ao an-toerana dia nanambara ny Praiminisitra fa tokony nifandrimbonana ny famerenana izany ka ireo tompon’andraikitra samihafa ao an-toerana dia efa tokony nahavaha io olana io. Nampanantena anefa izy fa tsy maintsy ho voavaha ao anatin’ny fotoana fohy izay olan’ny famatsiana rano fisotro madio izay ao an-tampon-tananan’Antalaha.
Mikasika ny vinan’I Ankoalabe, toerana izay notsidihin’ny delegasiona notarihin’ny Praiminisitra ihany koa, dia hisy ny fanamboarana pont-bailey amin’io toerana io, ho fanamorana ny famoahan-drano amin’io faritra io sy ho fanamorana ny fivezivezena amin’ny sisin-dranomasina.
Nandritra izao fivoriana izao, dia nasian’ny Lehiben’ny governemanta teny ihany koa ny fitantanan-draharaham-panjakana amin’ny ankapobeny, nantitranteriny hatrany fa “tokony ho alavirina ny kolikoly, ny halatra, ny famitaham-bahoaka…, fa tokony handeha amin’ny rariny sy ny hitsiny ny mpitondra isan-tsokajiny ho fikatsahana ny tombotsoa iombonana”. Ankilany kosa dia tokony hanaraka ny fitsipika izay misy ny vahoaka mba hiverenan’ny filaminana.
← Fidinan’ny Praiminisitra tany amin’ny kaomina ambanivohitra Mahazoarivo distrikan’Isandra
Dinik’asa tao Maroantsetra →
Fitsidihana tao Antsiranana : Miainga eny ifotony ny fampandrosoana an’i Madagasikara
Visite du district Besalampy